Idiploma -iNgcali yokuSebenza ye-BIM-iGeofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma-Ingcali yokuSebenza ye-BIM
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo locwangciso lokwakha, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwangokunjalo kwabo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa uyilo kunye nohlahlo-lwabiwo mali kumjikelo walo wokucwangcisa, ukulinganisa kunye nokuhanjiswa kweziphumo kwamanye amanqanaba enkqubo.
Yenza ubuchule bokucwangcisa, ukulinganisa kunye nokubekwa kweemodeli zedatha yokwakha. Le khosi ibandakanya ukufundwa kweeNavisworks, enye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lolawulo lweBIM; kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho ulwazi lunxibelelana khona kwezinye izigaba zenkqubo ezinje ngeNavyworks, iDynamo kunye neQuantity. Ukongeza, ibandakanya imodyuli yokuqonda yonke imijikelo yolawulo lwezixhobo phantsi kwendlela ye-BIM, kunye nemodyuli yoHlolo yoBunjineli kunye nokwazisa kwifilosofi yamaDijithali.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "Idiploma yokuSebenza kweBIM” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma -iNgcali yokuSebenza ye-BIM
I-BIM-5D yobungakanani bokususa …… .. i-USD 130.00 24.99
Ukuhamba komsebenzi kweBIM- iDynamo ………. iUSD 130.00 24.99
Hlaziya uyilo ………………… .. iUSD 130.00 24.99
Inkqubo ye-BIM ……………………… iUSD 130.00 24.99
Intshayelelo kumawele edijithali ……. iUSD 130.00 19.99
I-BIM 4D- NavisWorks ………………. iUSD 130.00 24.99
IDiploma - Ingcaphephe yemisebenzi yoluntu
IDiploma - iNgcali yeMveliso yoBomi